Ngwarira Mafungiro Aunoita
"Akati kwavari: Munomanikidzwa neiko? Mifungo inomukireiko mumoyo yenyu?" (Ruka 24:38).
Vakawanda havangwariri mafungiro avanoita. Vanofunga nenzira isina kunaka. Pfungwa dzemunhu dzinofanira kuvandudzwa. Dzinovandudzwa neShoko raMwari. Zvisizvo, dzinozofunga zvinhu zvisina kunaka. Kune dzimwe pfungwa dzinongoona zvisina kunaka chete.
Kuda pangaiswa mitemo mitsva. Vamwe vanhu vanobva vatovona sekuti mitemo iyi yaisirwa ivo. Vanenge vachiivona seyaunzwa kuzovakanganisa. Saka vanogara vachingofungira vamwe. Havana wavanovona seakanaka. Havana wavanovona seanovada. Ndiwo mafungiro avanoita. Ndiwo mavonero avanoita zvinhu.
Vanhu vakadai vanogona kutowanikwavo muChechi. Mumwe anogona kunzwa mharidzo. Anobva atofunga kuti Mufudzi vari kungoparidza iye. Saka anobva atorega kuuya kuchechi. Asi mumwe anganzwa mharidzo iyi. Anobva atoti, "Mufunge! Ndakauya kuchechi. Ndikawana Shoko richingotaura pamusoro pangu. Mufudzi vakanga vari kutaura zvinhu zviri kundinetsa chaizvo. Saka Ndava kugadzirisa hupenyu hwangu".
Vaviri ava vanenge vanzwa Shoko rimwe chete. Mumwe anobva afunga kusiya chechi. Asi mumwe anosarudza kuramba ari muchechi. Anenge atovona Shoko iri richimukurudzira kukura. Vaviri ava vakasiyana pachinyi? Vakasiyana pamafungiro avo. Saka mafungiro ako anogona kukuita munhu anobudirira. Anogonavo kuita kuti ukundikane muhupenyu. Ndiko kusaka tichigara tichitwasanudza pfungwa dzedu. Tinogara tichidzivandudza. Tinodzivandudza neShoko raMwari. Izvi ndizvo zvatinorairwa muna VaRoma 12:2.
Saka unofanira kushandura mafungiro aunoita. Zvisizvo, hupenyu hwako hahungashanduki. Sarudza kufunga zvakanaka. Sarudza kufunga nomazvo. Ngwarira pfungwa dzako. Usadzirega dzichifunga nenzira isina kunaka. Usadzirega dzichivona zvinhu nenzira isina kunaka. Mwari vane simba ravakatipa. Iri isimba rekusarudza zvinopinda mupfungwa dzedu. Saka tinogona kusarudza kugamuchira pfungwa dzakashata. Asi tinogonavo kusadzisiya dzichipinda mumisoro yedu. Saka dzidza kufunga zvinhu zvakanaka. Usavaraidza pfungwa dzakashata mumusoro mako. Izvi ndizvo zvatinorairwa muna VaFiripi 4:8. Inoti, "Pakupedzisira, hama dzangu, zvose zvazvokwadi, zvose zvinokudzwa, zvose zvakarurama, zvose zvakachena, zvose zvinodikanwa, zvose zvinorumbidzwa, kana kunaka kupi nokupi, kana chingarumbidzwa chipi nechipi, fungisisai izvozvo".
Pfungwa dzangu dzizere mazano akanaka. Ndinogara ndichizvivona ndichibudirira. Ndinozvivona ndichigara ndichikunda. Handiregi pfungwa dzakashata dzichipinda mumusoro mangu. Handizvivoni semunhu asiri kubudirira. Mweya Mutsvene ndivo vanondibatsira. Vanondipa pfungwa dzakanaka. Vanoita kuti nditaure mashoko akanaka. Vanoita kuti ndiite zvinhu zvinofanira kuitwa. Mwari ngavakudzwe!